तुलना चेकसम संग विभिन्न फोल्डर तुलना गर्नुहोस् ग्याजेट समाचार
चेकसम तुलना: पत्ता लगाउनुहोस् कि २ निर्देशिकाको जानकारीमा समान सामग्री छ कि छैन
कहिलेकाँही कहिले चाहिन्छ एक व्यापक ब्याकअप प्रदर्शन गर्नुहोस् हामीले हार्डड डिस्कबाट अर्को पूर्ण रूपमा बिभिन्नमा सबमिट गरेका जानकारीको। यदि यो छ भने तपाईं कसरी यी हार्ड ड्राइभहरूमा समावेश गरिएको जानकारीको आकलन गर्न सक्नुहुन्छ? यस जानकारीलाई थाहा पाउनको लागि राम्रो विकल्पले उपकरणलाई चेकसम तुलना भनिन्छ प्रयोग गरीरहेको छ।
निस्सन्देह, हामीले विशेष रूपमा २ हार्ड ड्राइभहरू उल्लेख गरेका छौं, यो केवल गतिविधि मात्र होईन जुन चेकसम तुलनाले हामीलाई प्रस्ताव गर्न सक्छ; साथै दुई फरक निर्देशिकाहरू तुलना गर्न सकिन्छ, जुन राम्रोसँग उही हार्ड ड्राइभमा वा बिभिन्न विभाजनहरूमा अवस्थित हुन सक्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा प्रयास गर्न को लागी हो पत्ता लगाउनुहोस् कि यी २ स्थानहरूमा फाईलहरूको समान संख्या छ, र समानता जुन तिनीहरू सबै एक अर्कामा छन्। अर्को हामी चेकक्सम तुलना गर्ने तरिकाले काम गर्छौं र हामी आफैंलाई फाइदा लिन सक्दछौं यदि हामीले आफूलाई यस प्रकारको कार्यमा समर्पित गर्यौं भने।
चेकसम स्वीकार्य नामकरण तुलना गर्नुहोस्
लामो समय भयो किनकि हामीले यो शब्द प्रयोग गर्यौं।नामकरण।, एक आवश्यक तत्व जसले यसमा निर्भर सबैका लागि राम्रो समझ प्रदान गर्दछ। यस चेकसम कम्प्यार एप्लिकेसनको बारेमा विशेष बोल्दा, यसले नामकरणलाई बुझ्नको लागि पर्याप्त सरलता अपनाउँछ, जुन केहि रंगहरूको माध्यमद्वारा प्रस्तुत गरिन्छ जुन हामी सजिलै पहिचान गर्न सक्दछौं एक पटक ती प्रस्तुत भएपछि। सबै भन्दा पहिले, हामीले यो एप्लिकेसन दुबै 32२-बिट वा-64-बिटको लागि पोर्टेबल संस्करणमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्दछ; थप रूपमा, उपकरण पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ र यो खुला स्रोत हो भन्ने तथ्यलाई नि: शुल्क धन्यवाद। यी परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राख्दै, चेकसम तुलना गर्न सकिन्छ आधिकारिक वेबसाइट लिंकबाट डाउनलोड गर्नुहोस्.
त्यहाँ तपाईले विन्डोज (र बिभिन्न संस्करणहरूमा) स्थापना गर्न यसको संस्करणमा दुबै फेला पार्नुहुनेछ यद्यपि, पोर्टेबल संस्करण प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ यस प्रकारको कागजी कार्यबाट बच्न। यदि तपाईंले यो अन्तिम विकल्प छनौट गर्नुभयो भने, फाईलसँग zz ढाँचा हुनेछ, त्यसैले तपाईं हुनु पर्छ एक विशेष अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहोस् यसको सामग्री अनजिप गर्न।
एक चोटि यो काम सकिसकेपछि तपाईले यसको लागि खोजी गर्नुपर्छ चेकसम सम्बन्धित कार्यान्वयनयोग्य सिर्जना गरिएको डाइरेक्टरीमा तुलना गर्नुहोस्, जुन बिन्दुमा इन्टरफेसले पहिले हार्ड डिस्कको मूल निर्देशिका देखाउँदछ जहाँ अपरेटि system प्रणाली स्थापना गरिएको छ। यस सन्दर्भमा, यो उपकरण Windows XP पछि काम गर्दछ।
इन्टरफेस समान प्रकार्यहरू र तत्वहरूको साथ २ स्तम्भहरू मिलेर बनेको छ; एउटा सानो चाल जुन यस समयमा हामी सिफारिस गर्न सक्दछौं फाईल अन्वेषक विन्डो खोल्नु र विश्लेषण गर्नु पर्ने डाइरेक्टरी अवस्थित ठाउँमा जानुहोस्। त्यहाँ तपाईंले केवल माथिल्लो भागमा क्लिक गर्नुपर्नेछ जहाँ फोल्डरको स्थान परिभाषित गरिएको हुन्छ। तपाईंले यो डाटा प्रतिलिपि गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि यसलाई चेकसम कम्प्यारमा पहिलो स्तम्भको स्पेसमा टाँस्नुहोस्।
समान तपाईंले अन्य स्तम्भको लागि गर्नुपर्नेछ, जुन, अन्य फोल्डरको डाइरेक्टरी खोजी गर्नुहोस् जुनसँग तपाईले पहिले छनौट गरेको तुलना गर्न चाहानुहुन्छ; यसै घडीमा तपाईं कुनै पनि प्रकारको भिन्नताको प्रशंसा गर्नुहुने छैन किनकि प्रक्रियाले अझै विश्लेषण सुरु गरेको छैन।
तपाईंले भर्खर चेकसमको तुलनामा माथिको (उपकरणपट्टी) बटनमा क्लिक गर्नुपर्दछ तुलना, जुन तपाईं यी प्रत्येक निर्देशिका मा विश्लेषण को प्रगति हेर्न शुरू हुनेछ।
सबैमा सब भन्दा चाखलाग्दो नाम यस अनुप्रयोगको लागि विकासकर्ता द्वारा प्रयोग गरिएको नाममा फेला पारियो, जुन निम्न रंगले समर्थन गर्दछ:
हरियो। यस र colorको साथ फाईलहरू समान छन् र तिनीहरू बीच कुनै भिन्नता छैन।
अमारिल्लो। यस र color्गका फाइलहरू अन्य फोल्डरमा अनुपस्थित छन्।
रातो। यसको मतलव फाईलहरू प्रत्येक फोल्डरमा अवस्थित छन् जुन हामीले चयन गरेका छौं, यद्यपि तिनीहरूसँग सुविधाहरू छन् जुन तिनीहरूलाई फरक बनाउँदछ।
हामीले अघिल्लो बिन्दुमा उल्लेख गरेका थोरै कुराको विश्लेषण गर्दा, यो हुन सक्दछ यदि दुई वर्ड फाईल सैद्धांतिक तवरमा उस्तै हो भने, तर ती मध्ये एकसँग अर्को पृष्ठ भन्दा बढि पृष्ठहरू छन्।
तपाईं प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ, यो उपकरण प्रयास गर्न आदर्श हुन सक्छ जान्नुहोस् कि हामीसँग दुई फरक डाइरेक्टरीमा के छ, केहि हाम्रो हितमा हुन सक्दछ यदि हामी एक हार्ड ड्राइभबाट अर्कोमा डाटाको एक ठूलो रकमको साथ ब्याकअप लिन लाग्यौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » चेकसम तुलना: पत्ता लगाउनुहोस् कि २ निर्देशिकाको जानकारीमा समान सामग्री छ कि छैन